Filtrer les éléments par date : vendredi, 04 février 2022
vendredi, 04 février 2022 19:14
Any amin’ny 403 Km Atsinanana somary Atsimo Atsinanan’i VATOMANDRY no nisy ny foiben’ilay rivodoza BATSIRAI tamin’ny 03 ora tolakandro teo. Niakatra ho 185 Km/ora ny rivotra entiny, izay arahina tafiotra 260 Km/h. Mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka 11 Km/ora.
Hiditra an-tanety eo anelanelan’ny Mahanoro sy Mananjary rahampitso Sabotsy 05 Febroary 2022, eo anelanelan’ny amin’ny 11 ora sy amin’ny 05 ora hariva izy.
vendredi, 04 février 2022 17:13
Toamasina Renivohitra : Fiomanana amin'ny rivodoza BATSIRAI
Miomana ny fihatrehana ny rivodoza Batsirai ny eo anivon'ny Kaominina Toamasina renivohitra, tarihan'ny Ben'ny Tanàna Rakotonirina Nantenaina Herilala, izay hanampiana ny vahoaka eto Toamasina.
Ao ny fanapahana ireo hazo, iarahana amin'ny Pompier sy ny CPC, ny fanadiovana ireo lakandrano izay mety manentsina tatatra, ary fanomanana ireo toerana andraisana ny olona izay mety mila izany.
Fantatrao ve: Ahoana ny momba ny rivodoza ?
Ny rivodoza dia tsy mitovy amin'ny orohorotany, azo fantarina tsara ny fotoana iaviany sy ny lalana mety alehany. Efa misy ny fitaovana toy ny satellite amin'izao afaka hitiliana tsara izany cyclone izany.
Ny cyclone dia fifanojoan'ny rivotra mafana be sy ny rivotra mangatsiaka eny ambony abakabaka eny amin'ny 12 000m, ka miteraka rahona mando, vokatry ny ranomasina lasa entona rehefa danian'ny masoandro.
Ny cyclone izany dia mitranga amin'ny fotoana mafana, fa tsy amin'ny andro ririnina velively.
Any Europe dia tsy misy cyclone satria tsy misy izay fahasamihafana be eo amin'ny hafanan'ny rivotra izay, fa aty amin'ny ilabola-tany atsimo no misy azy satria mifanojo ny rivotra mafana sy ny mangatsiaka avy any amin'ny pôle sud.
Inona ny cyclone?
vendredi, 04 février 2022 09:53
Mangarivotra Moramanga : Arabe no hadian'ny olona hakana ranontany hatsindry tafontrano
Misy andian'olona mangady ny arabe eo Mangarivotra (PK 1,700km) hanaovan- dry zareo fanamafisana ny tranony manokana, ka atahorana ny ahatapaka tanteraka indray io làlana io.
Mangarivotra, miala 1,700km, lalana miazo an' Anosibe An'Ala, miala 200m amin'ilay efa tapaka be.
vendredi, 04 février 2022 09:48
Tamin’ny 06 ora maraina teo dia
vendredi, 04 février 2022 09:37
Faritra Atsinanana : Fiomanana amin'ny BATSIRAI
Amperinasa tanteraka ny Kômity ny fitantanana ny loza voajanahary eo anivon'ny Faritra, izay tarihin'ny Goverinora RAFIDISON Richard Théodore sy ny Prefet Toamasina RAZAFIARISON Ziguis.
Efa mitsangana sy miodina 24/24ora ihany koa ny centre opérationnel BATSIRAI izay mandrindra ny fibaikoana eny an-kianja sy manangona ny vaovao maika.
Ny asa fanentanana no tena ifantohana mba hampihenana faran'izay kely ny fiantraikany amin'ny aina hafoy.
vendredi, 04 février 2022 08:52
Météo : Situation vendredi 04 février 2022 à 08h30